PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-20 - Izuze elinye iwonga intatheli yethu
Izuze elinye iwonga intatheli yethu
Isolezwe lesiXhosa - 2018-12-20 - IINDABA - PEDRO MAPELO
KANYE xa kusongwa unyaka, I’solezwe lesiXhosa libhiyozela impumelelo ezuzwe yintatheli yalo ethe yanikwa iwonga lisebe lezeNkcubeko, uLonwabo neZemidlalo kwiphondo leMpuma Koloni.
USithandiwe ‘Ngubechanti’ Velaphi uthiwe jize ngewonga lombhali obalaseleyo kwicandelo lezenkcubeko kwezendaba ku2018 kumsitho wokuvala unyaka obubanjelwe eMonti ngempelaveki egqithileyo.
UVelaphi ngomnye woohlahlindlela beentatheli ezazikhona mhla kwakusungulwa eli phephandaba lesiXhosa ngo2015.
UVelaphi yintatheli ezibaluleyo eMzantsi Afrika ngokubanzi ngokubhalela namaphephandaba esingesi amaninzi (Phantsi kweIndependent) abhentsise kuwo amabali okunyhashwa kwamalungelo oluntu, ipolitiki, awezoshishino nawenkcubeko – enye yezinto ezisentliziyweni yakhe kakhulu.
Emva kokwamkela iwonga, uNgubechanti uthethe wenjenje: “Ndiziva ndiwongeke kakhulu ngale mbasa. Kuhle futhi kuyachululumancisa ukubona ndiwongwa ngurhulumente wephondo laseMpuma Koloni. Ndithatha eli thuba ndithi huntshu kubaququzeleli nabagwebi bala mawonga. Ndiyazingca ngenkcubeko yam kwaye ndiyakholelwa kumandla wayo ekutshintsheni imeko yentlalo kwanoqoqosho lwaseMpuma Koloni nelizwe liphela.”
“La nto yokuba isiXhosa asinamandla wezoqoqosho, yinto nje yamavila. IsiXhosa sinamandla okutshintsha imeko yentlalo nezoqoqosho. Umzekelo apha kwiphephandaba I’solezwe lesiXhosa, sisebenza phantsi kweemfefe zolwimi lwesiXhosa. I’solezwe lesiXhosa lisekezelwe kwinkcubeko nakwizithethe zethu thina maXhosa. Kweli phephandaba sinecandelo lokulawulwa kwamaphupha, izithebe zengxoxo malunga nentlalo nezithethe zethu kwaneendaba ngobubanzi.”
Eli liwonga lesibini elifunyenwe yintatheli yethu kunyaka omnye. Lo nto ibhence ukunikela kweentatheli zethu emsebenzini wazo nasekuguquleni imo yentlalo yoluntu lwaseMpuma Koloni.
“Ukuba yinxalenye nephephandaba I’solezwe lesiXhosa kundikhulisile njengombhali wesiXhosa, ukusuka ekubhaleni ngezembali ukuya kwimiba yezenkcubeko nezopolitiko. Ngenene, nangaphandle koloyiko, ndingatsho ndithi kule minyaka iphantse ifikelele kwisine sisenza I’solezwe lesiXhosa, sikwazile ukunika ilizwi abantu baseMpuma Koloni naseNtshona Koloni, ababengakwazi kuthabatha nxaxheba kwimingxili yamajelo eendaba,” uvale ngalo mazwi uVelaphi.
Umhleli, uUnathi Kondile, naye ebekhona kulo msitho wangoMgqibelo, wongeze ngelithi “Xa norhulumente wephondo ekwazi ukunika ingqwalasela kwiphepha elifana neli lethu lesiXhosa, lo nto isinika ithemba kwaye iyasikhuthaza ukuba siqhube ngamabali abantu. Sivuyisana kakhulu noNgubechanti ngeli wonga, imbi into yokubukela umntu esenza umsebenzi omhle abe engafumani kungqinwa ngaphandle. Eli iwonga sisiqalo nje. Ndiqinisekile usezakuwawola!”
Intatheli yeSolezwe uSithandiwe Velaphi uwongwe ngenye imbasa